Ankona ilay reny mitondra vohoka, fa nilaozam-bady novonoin’ny herinaratra • L'Express de Madagascar
Ankona ilay reny mitondra vohoka, fa nilaozam-bady novonoin’ny herinaratra
LAHATRA SY ANJARA KA TSY MAINTSY ANDALOVANA NY FAHAFATESANA. MATY AMPERINASA TENY TALATAMATY VOKATRY NY FAHAMAIZANA TAMIN’NY HERINARATRA RAKOTONIRINA TAFITA ERIC. TAMPOKA TAMIN’NY FIANAKAVIANA TOKOA NY LOZA NAHAZO ITY RAIM-PIANAKAVIANA, VAO 27 TAONA. MAFY NY MAHAZO AN’ILAY RENIM-PIANAKAVIANA MANANOTENA TAMPOKA, NEFA MITONDRA VOHOKA DIMY VOLANA, SY MIARAKA AMIN’NY ZAZA VAO 4 TAONA.
Noentin-dRakotonirina Tafita Eric nanaraka azy any amin’ny fiainana mandrakizay ny alahelo nozakainy, andro vitsivitsy, nialoha ny nahafatesany. Namela kamboty zazalahy iray vao efa-taona sy zaza vao any an-kibon-dreniny ny lehilahy. Ireo vady aman-janany izay manahy mafy amin’ny mety hisian’ny fandravana ny tranobongo fonenan’izy ireo eny Ambohipanja Ankadikely.
Fantatra tamin’ny fanazavan’ireo fianakaviana vonton’ alahelo fa mpivarotra no asan-dRakotonirina Tafita Eric tao amin’ny orinasa misy azy. Nanatanteraka asa fametahana takelaby izy, tao anatin’ny andro vitsivitsy .
Efa very zokivavy
Ankoatra ny namoizan-dRakotonirina Edmond sy Ramiadanasoa Olga ity zanak’izy ireo lahitokana ity dia efa nisedra aloka ihany koa ny fianakaviana, taona maro lasa izay. Nanjavona tsy hita popoka ny zanak’izy ireo vavimatoa. «Mbola nisy zanakay vavimatoa zokin’i Tafita. Fony efa-taona io zaza io no tsy hita. Nipetraka teny Iavoloha izahay tamin’izany fotoana izany. Napetraka tamin’ny olona teny an-tanàna ilay zaza ka tsy hita taorian’ izay. Efa niakatra teny amin’ny Fitsarana ny raharaha mikasika izany», hoy izy mivady mitantara ny zavatra efa niainan’izy ireo. Nanomboka teo no lahimatoa sady lahitokana i Tafita, raha mbola misy zandriny vavy iray ihany koa.
Nasaina nanao miaramila
Mpanao fanatanjahantena, indrindra ny baolina kitra, Rakotonirina Tafita Eric, fony fahavelony. Ranjanana ny lehilahy ary matanjaka ihany koa. Noho io antony io,dia nampirisika azy hiditra amin’ny sekoly fanomanana miaramila ny rainy. Tsy nanaiky izany anefa ny lehilahy fa nisafidy kosa ny hijanona ho olon-tsotra ihany. «Efa taranaka miaramila izahay. Tamin’izy 20 taona teo ho eo no nitenenako izany tamin-janako ka nanoro hevitra azy aho mba hanao miaramila. Nisafidy ny hanao mpiambina anefa izy ka dia nohajaina ny safidiny», hoy Rakotonirina Edmond mahatsiaro an-janany. Nanomboka teo no nanao asa fiambenana (securité) nandritra ny dimy taona Rakotonirina Tafita Eric. Nijanona tsy niasa, nandritra ny herintaona kosa izy. Nahazo toerana tao amina orinasa iray izy, izao nindaosin’ny fahafatesana izao, taty aoriana. «Mamelona ny tokantranony amin’ny herim-pony izy mivady. Njaratiana Brigitte Aurelie vadiny kosa manao irony taxi-phone irony eny an-tanànan’izy ireo», hoy hatrany rainy.
Resy teny amin’ny Fitsarana
Raharaha ady tany, tapa-bolana lasa izay, no antony niakaran’ireo fianakaviana teny amin’ny Fitsarana. Indrisy, resy manoloana izany izy ireo. Rakotonirina Tafita Eric no anisan’ny niady mafy noho io raharaha io izay mifandray amin’ny tany misy ny trano fonenan’izy ireo eny Ambohipanja Ankadikely. Ny alarobia 16 novambra teo, no niseho teny amin’ny Fitsarana ny fianakaviana.
«Teny amin’ny polisy izahay nitaraina ka izy ireo no nanoro anay fa tokony
hiakatra ny raharaha. Manana ny taratasy izahay mikasika io tany io, saingy resy hatramin’ny farany. Hatramin’izao, mandindona anay mianakavy kely ny fandravana ny tranonay», hoy kosa i Njaratiana Brigitte Aurelie, vady navelan’i Tafita, mahatsiaro irery nilaozam-badiny. Anisan’ny nitondra alahelo tamin’ny fianakaviana ny andro nisehoan’ny loza sy ny naharesy azy ireo teny amin’ny Fitsarana.
«Resy tety an-tany ny zanako ka mbola resin’ny fahafatesana ihany koa, izay samy tamin’ny andro alarobia. Io andron’ny fitsarana io, no nahitako an-janako farany. Nampahery azy noho ilay fahareseny aho», hoy Ramiadanasoa Olga renin’i Tafita, kotsan-dranomaso.
Nanampy ny mpiara-miasa tamina asa hafa. «Vao niantso ahy an-telefaonina ny vadiko, ny talata tolakandro, nilaza tamiko fa mety tsy ho tafody noho ny asa enjehiny. Efa fanaony izany noho io asa nataony io, ka mandry ihany ny saiko. Ny maraina kosa, niantso azy an-tariby ihany aho, saingy tsy nandeha ny findainy. Tsy nanam-po na inona na inona ary tsy nieritreritra zavatra hafa aho», hoy i Njaratiana Brigitte Aurelie, manohy ny fitantarana ny fotoana farany niresahany tamim-badiny. Tampoka ary tsy nisy nanam-po ny loza.
«Efa teny am-pivarotana aho. Tonga teny amin’ ny fokontany ny solontena avy any am-piasana nilaza ny vaovao ratsy. Izaho kosa nasaina nankety Sabotsy Namehana izay tsy mbola nilazàna ny fahafatesam-badiko», hoy hatrany ity mananotena. Ankona tanteraka ny fianakaviana izay saika tsy nino ny loza nahazo an’Itompokolahy.
Roa lahy mpiara-miasa tamin’ity raim-pianakaviana ity no niaraka niharam-boina taminy. Manaraka fitsaboana any amin’ny hopitaly izy roa lahy ireo, ankehitriny.
Nisafidy ny tsy hanaovana ny fizahana ny razana (autopsie) intsony izy ireo. Rehefa vita ny fikarakarana rehetra, teny amin’ny tranon-dray aman-dreniny, dia teny Sabotsy Namehana no niaretan-tory ny vatana mangatsiaka. Nalevina eny amin’ny fasan-drazan’ny reniny eny Ambohitrangano, taorian’izay. Efa nisy ihany koa, hoy hatrany ny
fianakaviana, ny fandraisana an-tanana nataon’ny orinasa niasany tamin’izao fahoriana izao.
Mahatsiaro fahabangana ny fianakaviana, indrindra ny vady aman-janaka navelan-dRakotonirina Tafita Eric. Ity farany izay olo-tsotra tsy mba tia miadiady aman’olona, fony fahavelony. Be fandeferana sy tia ary manaja vady aman-janaka izy. Rakotonirina Fideraniavo Aaron kosa izay vao efa-taona monja no nilaozan-drainy sahady, raha mbola dimy volana am-bohoka kosa ny zandriny.
Hazandrano namoa-doza : Nafoin-dreniny tampoka ireo zanany kely roa vavy
FIVORIAMBEN’NY OIF – Fihaonana an-tampony feno fihatsarambelatsihy no vita teto Madagasikara